ALIEXPRESS ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို: ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ခြေလှမ်း - ALIEXPRESS - 2019
တိုင်း Self-လေးစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဂရပ်ဖစ်အစိတ်အပိုင်း (စသည်တို့ကိုအထိမ်းအမှတ်, လိုဂို) ဖြင့်သမုတ်သောရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခတ်ရှိသည်သငျ့သညျ။
ဤသင်ခန်းစာတွင်, ငါတို့ Photoshop မှာအရည်အသွေးမြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အခြေခံနည်းစနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး Lumpics.ru site ကို print ထုတ်ဖန်တီးပါ။
တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားဘောင် (ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး) ဆွဲပါ။ ယင်းလမ်းညွှန်ပေါ်တွင် cursor ၏လမ်းဆုံထားပါကိုင် SHIFT ကဆွဲထုတ်ဖို့စတင်ခဲ့သောအခါ, ဆဲကိုင် ALT။ ဒါကကိန်းဂဏန်းအားလုံးလမ်းညွန်အတွက်ဗဟိုကနေမဆန့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ငါဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှု? အထဲတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်, သင်တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားတံဆိပ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးအတွက်အသိပေးချက်ရှိသေး၏။ ပြင်နှင့်အတွင်းစိတ်ကောက်ကြောင်း၏ radii တိုက်ဆိုင်ကြဘူး, ထိုသို့ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းနှင့်အတူအလွှာသွားပြီးအခမဲ့ဖုန်းခေါ် key combination ကို CTRL + T. ပြောင်းလဲ ထို့နောက်အပိုငျးပိုငျးဖန်တီးသောအခါကဲ့သို့တူညီသောနည်းလမ်းသုံးပြီး (SHIFT + ALT), ပုံရိပ်မှာသည်အတိုင်း, ကိန်းဂဏန်းကိုဆန့်။
တစ်ဦးက supporting အပိုင်းအစဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ palette ရဲ့ထိပ်မှာအသစ်တခုအလွတ်အလွှာ Create နှင့် tool ကိုရှေးခယျြ "Elliptical Marquee".
(ထိုလမ်းညွှန်များ၏လမ်းဆုံပေါ် cursor ထားပြန်အလယ်ဗဟိုကနေစက်ဝိုင်းဆွဲSHIFT + ALT).
ထို့နောက်ညာဘက်ရွေးချယ်ခြင်းအတွင်းပိုင်း click နဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါ "လေဖြတ်".
လေဖြတ်အလေးချိန်, select လုပ်ပါမျက်စိအရောင်အရေးကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။ တည်နေရာ - ပြင်ပပေါ်မှာ။
ကျနော်တို့ဖြတ်လမ်း deselect CTRL + D ကို.
အသစ်ကအလွှာအပေါ်အခြားလက်စွပ်ကိုဖန်တီးပါ။ အဆိုပါလေဖြတ်ခြင်း, အနည်းငယ်လျော့နည်းတည်နေရာပြုပါ - အထဲမှာ။
အဆိုပါပုံနှိပ်၏ဗဟိုအတွက်လိုဂို - ယခုဂရပ်ဖစ်အစိတ်အပိုင်းထားပါ။
ငါကဒီမှာတွေ့ပြီ web ပေါ်မှာပုံဖြစ်ပါသည်:
နောက်ခံ (အဖြူ) နှင့်အတူအလွှာ၏မြင်ကွင်း Remove နှင့်အပေါ်ဆုံးအလွှာအပေါ်ဖြစ်ခြင်း, ကီးဘုတ် shortcut ကိုအပေါငျးတို့သအလွှာတစ်ခု Imprint ကို Ctrl + Alt + Shift + E ကို.
ကျွန်တော်တို့သည်အထိပ် panel ကဒုတိယအလွှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါကိုင် CTRL နှင့်ထိပ်ဖျားနဲ့အောက်ဆုံး မှလွဲ. ရှိသမျှကိုအလွှာကို select နှင့်ဖယ်ရှား - သူတို့မရှိတော့လိုအပ်နေပါသည်။
နှစ်ချက်တံဆိပ်ခတ်အတူအလွှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါနှင့် Layer Style ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ကို item ကို select "Overprinting".
အဆင်သင့် Print, ဒါပေမယ့်သင်ကအနည်းငယ်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျစေနိုင်သည်။
သစ်တစ်ခုအချည်းနှီးသောအလွှာကိုဖန်တီးကာစစ်ထုတ်ရမညျလျှောက်ထား "တိမ်"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် : Dပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်မဆုံးရှုံးစေရန်။ ဒါဟာ filter ကိုမီနူးဖြစ်ပါသည် "Filter - Render".
ထိုအခါတူညီတဲ့ filter ကိုအလွှာကိုလျှောက်ထား "ဆူညံသံ"။ ရှာရန် menu ကို "Filter ကို - ဆူညံသံ - ဆူညံသံ Add"။ တန်ဖိုးသင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု:
ယခုဤအလွှာများအတွက် blending mode ကိုပြောင်းလဲစေ "Screen".
အနက်ရောင်အရောင်နဲ့ 2-3 pixels ကို၏အရွယ်အစားမှာတစ်ဖြီးကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီအဖြီးကျပန်းခြစ်အတွက်တံဆိပ်ခတ်အတူအလွှာမျက်နှာဖုံးပေါ်တွင် tweet ။
မေးခွန်း: သငျသညျအနာဂတျမှာဒီတံဆိပ်ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်လျှင်, ဘာလဲ? နောက်တဖန် Draw? အမှတ် Photoshop မှာဒီလိုလုပ်ဖို့စုတ်တံအတွက်တစ်ဦး function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်စာနယ်ဇင်းများ၏ကောက်ကြောင်းအပြင်ဘက်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ဆူညံသံဖယ်ရှားပစ်ရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီကျနော်တို့စာနယ်ဇင်းလုပ်ဖို့ CTRL နှင့်ရွေးချယ်ရေးအတွက်ယင်းအလွှာ thumbnail ကိုပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ထိုအခါ (မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး, selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ရန်အတူအလွှာပြောင်းရွှေ့CTRL + SHIFT + I ကို) ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် DEL.
(deselectCTRL + D ကို) ထိုဆက်လက်။
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူအလွှာသွားပြီးစတိုင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါကအပေါ်ကို double-click လုပ်ပါ။ သည် "အရောင်ပြသမှု" တွင်အနက်ရောင်မှအရောင်ကိုပြောင်းလဲ။
Next ကို, (အထက်အလွှာကိုသွားနှင့်ပုံနှိပ်အလွှာဖန်တီးCTRL + SHIFT + ALT + E ကို).
menu ကိုသွားပါ "Edit ကို - Brush Define"။ ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ဖြီးနှင့်စာနယ်ဇင်း၏နာမကိုပေး "အိုကေ".
ပုံနှိပ်ပါ created နှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက်အဆင်သင့်။